ဘဟားမားနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဘဟားမားစ်နိုင်ငံ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ကိုဩဒိနိတ်: 24°15′N 76°00′W﻿ / ﻿24.250°N 76.000°W﻿ / 24.250; -76.000
ဘဟားမားစ် ဓနသဟာယ နိုင်ငံ
ဆောင်ပုဒ်: "Forward, Upward, Onward, Together"
နိုင်ငံတော် သီချင်း: "March On, Bahamaland"
ပြည်ထောင်စု နှစ်ပါတီ ပါလီမန်
ဆာ ကော်နီလီယပ် အယ်ဗင် စမစ်
၁၉၇၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်
၁၃,၈၇၈ km2 (၅,၃၅၈ sq mi) (အဆင့်: ၁၅၅)
၃၉၁,၂၃၂ (အဆင့် - ၁၇၇)
၂၅.၂၁/km2 (၆၅.၃/sq mi) (အဆင့် - ၁၈၁)
$၁၂.၆၁၂ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၁၄၈)
$၃၃,၄၉၄ (အဆင့် - ၄၀)
$၁၂.၈၀၃ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၁၃၀)
$၃၄,၁၀၂ (အဆင့် - ၂၆)
အလွန်မြင့် · ၅၈
ဘဟားမား ဒေါ်လာ (BSD)
(US dollarsအား ကျယ်ပြန့်စွာ လက်ခံထား)
ဘဟားမားစ်နိုင်ငံ၏ တရားဝင် နာမည်အပြည့်အစုံမှာ ဘဟားမားစ်ဓနသဟာယနိုင်ငံ (Commonwealth of The Bahamas) ဖြစ်သည်။ ကျွန်းပေါင်း(၂၉)ခု၊ သန္တာကျွန်းပေါင်း (၆၆၁)ခု၊ ရေပေါ်ကျောက်ဆောင်ပေါင်း (၂၃၈၇)ခုရှိသည်။ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာထဲတွင် တည်ရှိသည်။ ကျူးဘားနိုင်ငံ နှင့် ဟစ္စပါနီယိုလာကျွန်း (ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ + ဟေတီနိုင်ငံ) တို့၏ မြောက်ဘက်၊ တာ့ခ်နှင့်ကိုင်ကော့စ်ကျွန်းများ၏ အနောက်မြောက်ဘက်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၏ အရှေ့တောင်ဘက် တွင်တည်ရှိသည်။ ကုန်းမြေဧရိယာစုစုပေါင်း ၁၃၉၃၉စတုရန်းကီလိုမီတာကျယ်ဝန်းသည်။ လူဦးရေစုစုပေါင်း ၃၃၀,၀၀၀ခန့်ရှိသည်။ မြို့တော်မှာ နာဆော (Nassau) ဖြစ်သည်။
ပထဝီဝင်အနေအထားအရ ဘဟားမားစ်ကျွန်းသည် ကျူးဘား၊ ဟစ္စပါနီယိုလာ၊ တာ့ခ်နှင့်ကိုင်ကော့စ်ကျွန်းများနှင့် နယ်မြေတစပ်တည်းဖြစ်သည်။
မူလအစက အာရာဝကန် တိုင်နို လူမျိုးများ နေထိုင်ကြသောဒေသဖြစ်သည်။ ဘဟားမားစ်သည် ၁၄၉၂တွင် ကမ္ဘာသစ်ကို ပထမဆုံးရှာတွေ့ခဲ့သော ကိုလံဘတ် ၏ ပထမဆုံးခြေချခဲ့သော နေရာလည်းဖြစ်သည်။ ဘဟားမားစ်ကို ကိုလိုနီနယ်အဖြစ်မသိမ်းပိုက်ခဲ့သော်လည်း ဒေသခံ ဘဟားမီးယန်းတိုင်နိုလူမျိုးများကို ဟစ္စပါနီယိုလာကျွန်းသို့ ကျွန်အဖြစ် သယ်ယူရောင်းချခဲ့သည်။ ဘဟားမားစ်ပိုင်ကျွန်းများသည် ၁၅၁၃မှ ၁၆၅၀ကြား ဗြိတိသျှများ အခြေလာချချိန်၌ ခြောက်သွေ့လျက် ရှိသည်။
၁၇၁၈တွင် ဘဟားမားစ်သည် ဗြိတိသျှအောက်ရောက်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲအပြီးတွင် ဗြိတိသျှအစိုးရသစ္စာတော်ခံများနှင့် ကျွန်အဖြစ်သွတ်သွင်းခြင်းခံကြရသော အာဖရိကန်လူမျိုးများသည် ဘဟားမားစ်ကျွန်းပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့လာကြပြီး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ၁၈၀၇ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှအင်ပါယာအတွင်း ကျွန်စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်သောအခါ ၁၉ရာစုနှစ်များအတွင်း တော်ဝင်ရေတပ်မှ အာဖရိကန်ကျွန်များသည် လွတ်မြောက်ကာ ဘဟားမားစ်ကျွန်းတွင် လာရောက်အခြေချနေထိုင်ကြသည်။ ဘဟားမားစ်ကျွန်းများပေါ်တွင်မူ ကျွန်စနစ်သည် ၁၈၃၄ခုနှစ်ကျမှသာ ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
ဘဟားမားစ်ဟုသောဝေါဟာရ မည်သို့ဖြစ်လာသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရပေ။ စပိန်စကားဖြစ်သော ဘဂျားမား baja mar ("shallow seas")မှ ဆင်းသက်လာသောစကားလည်း ဖြစ်နိုင်သလို၊ ဒေသခံ လူကေယန်ဘာသာစကားဖြစ်သော ဘ-ဟ-မား ba-ha-ma ("large upper middle land") မှ ဆင်းသက်လာသည်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ 
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named cia.gov
↑ Bahamas Department of Statistics Archived9December 2015 at the Wayback Machine., PDF document retrieved 20 April 2014.
↑ •GENERAL SITUATION AND TRENDS။ Pan American Health Organization။ 27 April 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Mission to Long Island in the Bahamas"၊ Evangelical Association of the Caribbean။7July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on4March 2016။
↑ "1973: Bahamas' sun sets on British Empire"၊ BBC News၊9July 1973။
↑ ၇.၀ ၇.၁ ၇.၂ ၇.၃ World Economic Outlook Database, April 2019။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
↑ Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF)။ #REDIRECT ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်။ 15 December 2020။ pp. 343–346။ ISBN 978-92-1-126442-5။ 16 December 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘဟားမားနိုင်ငံ&oldid=697585" မှ ရယူရန်